FIFA စံချိန်စံညွှန်းအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသော အယ်လ်ဂျီးရီးယားအားကစားကွင်းကို တရုတ်ကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်ပေးခဲ့ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးခဲ့သည့် အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အယ်လ်ဂျီးယားစ်မြို့ရှိ Baraki အားကစားကွင်းအား ဇွန် ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အယ်လ်ဂျီးယားစ် ၊ ဇွန် ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
Baraki အားကစားကွင်းသည် ဖီဖာ(FIFA) ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော အားကစားပြိုင်ပွဲများလက်ခံကျင်းပရန် ဖီဖာကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ စံချိန်စံညွှန်အားလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးကစားကွင်းကြီးဖြစ်ကြောင်း ယင်းအားကစားကွင်းကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည့် China Railway Construction Engineering Group တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် အယ်လ်ဂျီးယားစ်မြို့တွင် တည်ရှိသည့် Baraki အားကစားကွင်းသည် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၆၈ ဟက်တာရှိပြီး မြင်းကုန်းနီးပုံစံဖြင့် ပရိသတ် ၄၀,၀၀၀ ဝင်ဆံ့ကာ တရုတ်ကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အယ်လ်ဂျီးယားစ်မြို့၌ China Railway Construction Engineering Group မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးသော Baraki အားကစားကွင်းအား အယ်လ်ဂျီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Ayman Benabderrahmane ( ဝဲ-ဒုတိယ) က ဇွန် ၁၆ ရက်တွင်လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Ayman Benabderrahmane သည် ပြီးခဲ့သော ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် ယင်းအားကစားကွင်းသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
Algerian stadium constructed by Chinese company to fulfil all FIFA criteria
ALGIERS, June 18 (Xinhua) — Baraki Stadium is the first stadium in Algeria to meet all the FIFA criteria for hosting events, including the FIFA World Cup, according to the constructor of the stadium — China Railway Construction Engineering Group.
Locating in Algerian capital Algiers, Baraki Stadium covers an area of about 68 hectares, withacapacity of 40,000 seats in saddle shape, introduced the Chinese company.
Algerian Prime Minister Ayman Benabderrahmane inspects the Baraki Stadium on Thursday.
Photo(1,3,4) Photo taken on June 16 shows the Baraki Stadium in Algiers, Algeria. (Xinhua)
Photo (2) Algerian Prime Minister Ayman Benabderrahmane(L2) inspects Baraki Stadium constructed by China Railway Construction Engineering Group in Algiers, Algeria on June 16, 2022. (Xinhua)